Gịnị Video Formats Ọ Nexus 7 Nkwado?
> Resource> Video>-atụ aro Video Formats N'ihi Nexus 7
Dị nwetara aka gị na Nexus 7 na ike na-eche bulite ma ọ bụ nyefee niile nke gị mgbasa ozi faịlụ jidesie ya? Ị maara na ngwaọrụ gị juputara na okwu nke na-akwado faịlụ na playback? Bụrụ na ọ bụghị, nanị na-eso anyị site n'ihu ị na-eji awa na-ebufe niile nke gị mgbasa ozi faịlụ dị nnọọ iji laghachi na njehie ozi nke ihe ghara ịdị irè ma ọ bụ na-emegide faịlụ Ọkpụkpọ. Ọ ga-abụ a n'ụzọ kwụ ọtọ usoro. Otú ọ dị, ọ nwere ike inwe mara mma na-akụda mmụọ mgbe ọ adịghị arụ ọrụ dị ka otú anyị chere na o kwesịrị ịdị.
Nkebi nke 1: akwado File Formats maka Nexus 7
Part 2: Best Video Setting maka Nexus 7
Nkebi nke 3: Atọrọ Video ntọala maka Nexus 7
Ọ bụrụ na ụfọdụ nke gị mgbasa ozi faịlụ na-adịghị n'ime akwado ndepụta, ị ga-mkpa iji tọghata ha n'ihu importing ya na gị na Nexus 7. ​​Gụọ ọzọ na otú i nwere ike na-ahọrọ nri video Ntụgharị maka onwe gị.
AAC, FLAC, MP3, Midi, PCM, ife, Vorbis, AMR-WB, AMR-NB
The MP4 faịlụ bụ ihe kasị mma video usoro maka playback na Nexus 7, paired na codec-atụ aro ka n'okpuru:
Ọ bụrụ na ị nwere video Ntụgharị-agha ụgha banyere ebe, ị pụrụ nanị isi na ntọala dị ka e kwuru nke mere na ị ga-esi nke kacha mma mma nke gị videos. Ọ bụrụ na ị na-eme adịghị, lelee otú i nwere ike tọghata gị faịlụ ma online ma ọ bụ site a desktọọpụ converte r.
Kama na-aga site hassle nke inwe ọsọ ọsọ ọ bụla nke video ntọala, ị nwere ike ozugbo họrọ gị oke nke ngwaọrụ site na Wondershare Video Ntụgharị Ultimate. Mgbe launching usoro ihe omume, ị nwere ike ma Tinye Files si eme nchọgharị gị obodo nchekwa, a ngwa ngwa ikpuru-na-dobe ma ọ bụ ọbụna Ibu Ibu gị DVD. Bụghị na kemfe? Na n'elu nke, ị nwekwara ike idezi ma ịkọrọ gị videos jidesie YouTube ma ọ bụ Facebook mgbe ọ bụla ị na-amasị! E nwere ga-enweghị mmachi nke nbudata videos si ọkacha mmasị gị online gụgharia saịtị. Gịnị ka ị na-eche?
Gị mma video ntọala maka Nexus 7 nwere ike Ewepụtara site na ịpị Ntọala bọtịnụ.